Tilmaamaha qaarkood si loo hagaajiyo amniga Linux | Laga soo bilaabo Linux
Ilaalinta kombiyuutarka isku xiran waa caqabad aan dhamaaneyn oo aan dhamaaneyn, xitaa Linux xitaa iyada oo ay jirto ka ammaan badan Windows. Tallaabooyinkan fudud ee aan kugula talinayno ZDNet waxay kaa caawin doonaan inaad ilaaliso nidaamkaaga Linux. Talada ayaa ah mid waqtigeedii la siiyay iyadoo laga hadlayo buuqii ka dhashay boostada hore ku saabsan amniga Linux.
Ma u baahanahay ilaaliye? Linux-kaygu ammaan ma yahay? Hagaag, sax maahan, laakiin inbadan oo kamid ah amaanka nidaamku wuxuu kuxiranyahay dadka isticmaala. Nidaam aamin ah maahan midka uusan isticmaaluhu ka walwalayn ammaankooda. Tilmaamaha aan halkan ku wadaagayo waxay la xiriiraan dhaqamadaan ay isticmaalayaasha iyo / ama maamulaha nidaamka tixgelinayaan si loo wanaajiyo ammaankooda.
1 1: Isticmaal furayaasha sirta
2 2: Ku qasbi dadka isticmaala inay badalaan furahooda sirta ah
3 3: Ha iska dhigin SELinux
4 4: Ha u galin as root ahaan asal ahaan
5 5: Ku rakib cusbooneysiinta amniga si deg deg ah
6 Si aad buur fuulo waa inaad qaaddaa talaabooyin yar yar
1: Isticmaal furayaasha sirta
Dad badan, tani waa dhib. Markaad gasho, mashiinkaagu wuxuu sameeyaa codsiyo ah inuu kugu xirmo shabakad (ama server LDAP, iwm), nidaamku wuxuu kaa codsanayaa inaad gasho furaha sirta ee "keyring" (ama keyring). Waxaa jira jirrab aad u weyn oo lagu joojinayo muuqaalkan, adiga oo ku siinaya furaha sirta ah ee madhan isla markaana diidaya digniinta ah in macluumaadka loo gudbin doono si aan qarsoodi ahayn (oo ay ku jiraan furaha laftiisa!). Tani fikrad fiican maahan. In kasta oo runti dhib tahay, muuqaalkan ayaa sabab loo hayaa - in lagu kaydiyo sirta xasaasiga ah markii loo soo diro shabakadeena.
2: Ku qasbi dadka isticmaala inay badalaan furahooda sirta ah
Goob kasta oo adeegsadeyaal badan ah (sida Linux), waa inaad hubisaa in adeegsadayaashaadu badalaan furahooda sirta ah waqti ka waqti. Si tan loo sameeyo, isticmaal amarka cayda. Waxaad ku hubin kartaa dhicitaanka lambarka sirta ah ee isticmaalaha amarka sudo chage-l USERNAME (meesha USERNAME ay tahay magaca isticmaalaha aad rabto inaad hubiso). Hadda, aan dhahno waxaad dooneysaa erayga sirta ah ee isticmaaleha oo ku qasbi inay beddelaan kalfadhiga soo socda. Si tan loo sameeyo, waad maamuli kartaa amarka sudo-E EXPIRATION_DATE chage-mM MINIMUM AGE MAXIMUM AGE-IW INACTIVITY_PERIOD DAYS_BEFORE_EXPIRED (halkaasoo dhammaan xulashooyinka waaweyn ay tahay in lagu qeexo isticmaalaha). Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan amarkan, eeg bogga ninka (Waxaan qortay amarka nin chage).
3: Ha iska dhigin SELinux
Sida furaha oo kale, SELinux ayaa sabab u ah. SE wuxuu u taagan yahay Security Enhanced oo wuxuu bixiyaa farsamooyinka xakameynaya gelitaanka codsiyada. SE waxay u taagan tahay Nabadgelyo Kobcisay waxayna bixisaa farsamaynta xakamaynta gelitaanka codsiyada. Waxaan aqriyay tiro "xalal" ah oo ku saabsan dhibaatooyinka kala duwan halkaasoo lagugula talinayo inaad iska joojiso SELinux. Xaqiiqdii, in ka badan xalka, cabbirkani wuxuu ku dhammaanayaa abuurista dhibaatooyin badan. Haddii barnaamij gaar ah uusan si sax ah u shaqeyneynin, waxaa lagugula talinayaa inaad barato wax ka beddelka siyaasadaha SELinux ee ku habboon baahiyahaaga halkii aad naafada ka dhigi lahayd SELinux gebi ahaanba. Haddii aad u aragto inay dhib ku tahay inaad ku dhex sameyso khadka amarka, waxaad u baahan kartaa inaad ku ciyaarto is-dhexgal loo yaqaan 'polgengui'.
4: Ha u galin as root ahaan asal ahaan
Haddii aad u baahan tahay inaad maamul ku sameyso mashiin, u gal sida isticmaalehaaga caadiga ah iyo sidoo kale inaad u adeegsato asalka isticmaalaha ama ka faa'iideyso sudo. Haddii ay tahay inaad ku maamusho kombuyuutar, u gal sida isticmaalehaaga caadiga ah oo aad u isticmaasho su ama sudo si aad u qabato hawshaas gaarka ah ee leh mudnaanta xididka. Adoo galaya isticmaalaha asalka ah, waxaad si wax ku ool ah uga hortageysaa kuwa ku soo xadgudbaya mid ka mid ah caqabadaha amniga ugu weyn adigoo u oggolaanaya iyaga inay helaan nidaamyo iyo nidaamyo hoose oo aan caadi ahaan la heli karin marka la galayo adeegsade ahaan. Ku qor koontadaada caadiga ah. Weligaaba. Muhiim maaha in gelitaanka lambarka sirta ah ee barakaysan markasta oo aad u baahato inaad wax qabato ay buuxineyso dulqaadkaaga.
5: Ku rakib cusbooneysiinta amniga si deg deg ah
Farqi weyn ayaa u dhexeeya habka Linux iyo Windows ay u maareeyaan cusbooneysiinta. In kasta oo Windows sida caadiga ah uu sameeyo cusbooneysiin ballaadhan hal mar, Linux wuxuu sameeyaa cusbooneysiin yaryar oo soo noqnoqda. Inaad iska indhatirto cusbooneysiintan waxay noqon kartaa masiibo haddii daloolka saxda ah ee nabadgelyada uusan ku xirmin nidaamkaaga. Weligaa ha iloobin in qaar ka mid ah cusbooneysiintani ay yihiin dhejisyo amni oo ay tahay in isla markiiba la dhaqangaliyo. Sababtaas awgeed, waligaa ha iska indha tirin astaanta muujineysa helitaanka cusbooneysiin cusub. La soco taariikhda, iyo dhamaadka maalinta, waxaad lahaan doontaa nidaam ka ammaan badan.
Si aad buur fuulo waa inaad qaaddaa talaabooyin yar yar
Adoo raacaya tilmaamahan warqadda, nidaamkaagu wuxuu noqon doonaa mid aad u ammaan badan. Dabcan, kani ma aha liistada dhameystiran ee waxyaabaha aad sameyn kartid si aad u horumariso amnigaaga. Kani waa bilow, nooc ka mid ah liistadaas oo ay ku jiraan kuwa "doqonnimo" ah oo waxyaabo badan oo adeegsadayaal ah ay isku dayaan inay sameeyaan oo si weyn u wiiqaya amniga nidaamka ay adeegsadaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Qaar ka mid ah tilmaamaha lagu hagaajinayo amniga Linux-gaaga
Adrian2mil 10 dijo
Aynu ku heshiinno in kombiyuutarka keliya ee isticmaala guryaha qaar ka mid ah waxyaabahan ay runtii yihiin wax laga xumaado, tusaale ahaan qoritaanka lambarka sirta ah markasta oo aad nidaamka gasho.
Hadday run tahay. Waa wax dhib badan, laakiin haye ...
cilmiga dhirta dijo
Sida had iyo jeer maqaal cajiib ah 🙂
talo wanaagsan, sikastoo aadan uheleynin sida loo fulinayo, waxaad dhahdaa waxa la sameeyo laakin maheysid sida looqabanaayo, bilowga ah "sida loo sameeyo" waa mid aad muhiim u ah, way fiicnaan laheyd hadaad daabacdo. tallaabooyinka
Shirka Software-ka Bilaashka ah ee 2010